पीपीईभित्र छोपिएको पी’डा : सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका यी नर्सहरुको कहानी : – Sadhaiko Khabar
पीपीईभित्र छोपिएको पी’डा : सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका यी नर्सहरुको कहानी :
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख २०, २०७८ समय: ९:०२:४९
नेपालगञ्ज/ कोरोना उपचार केन्द्र बनेको भेरी अस्पताल, नेपालगन्जकी स्टाफ नर्स प्रीति खड्कालाई शुक्रबार पीपीई लगाएर काम गर्ने जाँगरै थिएन । महिनावारी भएकाले सेनेटरी प्याड लगाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसमाथि पीपीई थपिँदा शरीर बाफिएर उकुसमुकुस हुन्छ । तर पीपीई नलगाए महा’मारीको शि’कार हुने ड’र छ ।
पीपीई लाउनै पर्‍यो । यहाँ दिनहुँ संक्र’मित थपिँदै छन् । सबैले सहज उपचार नपाउने सम’स्या छ । त्यसैले उनी नयाँ वर्षदेखि बिदा नबसी खटिएकी छन् । प्रीति शनिबार रात्रि ड्युटीमा खटिइन् । उनीसँगै स्टाफ नर्स कमला नेपाली, सुनीता साहकारी, निशा पुन, यमकुमारी थापा कोरोना संक्र’मितको पलपलको अवस्था बुझ्दै हेरचाहमा खटिएका थिए ।
उनीहरूका अनुसार एक जनाले ३० र ४० जना बिरामीलाई औषधि खुवाउनुपर्छ । दबाइ खुवाएर मात्रै कहाँ सुख पाउनु र ? बिरामीको छट’पटीले मन पो’ल्छ । पीपीईभित्रको गर्मी त छँदै छ । वार्डबाट बाहिर निस्किएपछि उनीहरूले ठूलो यु’द्ध जितेजस्तो महसुस गर्छन् । त्यो अनुभूति क्षणिक हुन्छ । उनीहरूलाई शनिबार अन्य दिनभन्दा धपे’डी भयो । नयाँ सिफ्टका साथीहरू आउन ढिला गरेपछि पीपीई खोलेर बस्न सक्ने अवस्था रहेन ।
औषधि खुवाएर वार्ड बाहिर अस्पतालको छेउमा राखिएको सोफामा तीन जना नर्स लस्करै थकान मेट्दै थिए । त्यही बेला खिचेको तस्बिर शनिबार र आइतबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । तस्बिर कसले खिच्यो ? नर्स यमकुमारीलाई अलिअलि याद छ ।
थकाइले आँखा खुल्न सकेका थिएनन् । अस्पतालमा चेकअप राउन्डमा आएका चिकित्सक चन्द्रप्रकाश साहुले ‘तिमीहरूको फोटो खिच्दिऊँ’ भन्दै जिस्काएका थिए । ‘फेरि हामी भाइरल हौंला है’ भन्दै कोही हाँसेको थियो । बर्दियाकी प्रीति घरबाटै आउजाउ गर्छिन् । अस्पतालमा बस्ने ठाउँ छैन । परिवारसित ‘परा ई’ भएर बस्नुपरेको छ । अरूलाई कोभिड सर्न सक्ने भएकाले उनी घर गए पनि छुट्टै बस्छिन् । यो समा’चार कान्तिपुर दैनि’कमा छ ।